ရာစုနှစ်ဝက် နီးပါးကြာ တရုတ်-ဂျပန်ဆက်ဆံရေး ရှေးအလားအလာ ဘယ်လိုလဲ - Yangon Media Group
ရာစုနှစ်ဝက် နီးပါးကြာ တရုတ်-ဂျပန်ဆက်ဆံရေး ရှေးအလားအလာ ဘယ်လိုလဲ
ယခုနှစ်ဟာ တရုတ်နဲ့ ဂျပန်တို့ရဲ့ ပုံမှန် ဆက်ဆံရေးထူထောင်ခဲ့တဲ့ ၄၅နှစ်ပြည့် မြောက်တဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄၅နှစ်က ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ကာကူအီတာနာကာဟာ တရုတ် ပြည်ကိုအလည်လာခဲ့တယ်။ နှစ်နိုင်ငံခေါင်း ဆောင်တွေဟာ စက်တင်ဘာ ၂၉ရက်မှာ ပူးတွဲ ကြေညာချက်ထုတ်ခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီကာလဟာ တရုတ်-ဂျပန်ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးရဲ့အစဖြစ်တယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မဖြစ်မီ ဂျပန်ဟာ တရုတ်နဲ့ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်တွေကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီး ကိုလိုနီလုပ်ခဲ့တယ်။ ဂျပန်ကိုဆန့်ကျင်လို့ တရုတ်အရှေ့မြောက်နန်ကင်းမြို့မှာ လူသုံးသိန်းလောက် သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုတယ်။ တရုတ်နဲ့ကိုရီးယားတို့ဟာ ဒုတိယကမ္ဘာ စစ်ကာလမှာ ဂျပန်လက်အောက်က လွတ်မြောက်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ နှစ်ရှည်လများကိုလိုနီအ ဖြစ်အုပ်ချုပ်ဖိနှိပ်မှုခံခဲ့ရတာကို တရုတ်နဲ့ကိုရီးယားတို့က အစဖော်ပြဿနာရှာနေကြတာတွေ့ ရတယ်။
ယခုသံတမန်ဆက်ဆံမှု ၄၅ နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်မှာ နှစ်နိုင်ငံအကြားပုံမှန်ဆက်ဆံရေး ဖြစ်ထွန်းအောင်လုပ်ဖို့ နှစ်နိုင်ငံစလုံးမှာ တာဝန်ရှိနေကြတယ်။ ယခင်နိုင်ငံရေးသမားဟောင်းကြီးတွေက ဂျပန်-တရုတ်ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးကို ထူထောင်ခဲ့ ကြတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ၄ဝ ကျော်မှာ နှစ်နိုင်ငံတို့ဟာ ပုံမှန်ချစ်ကြည်မှုသဏ္ဌာန်ကိုဖော်ဆောင် ခဲ့ကြတယ်။ တရုတ်-ဂျပန်ဆက်ဆံရေးပထမနှစ် ၂ဝ ကျော်ကာလအတွင်းမှာ ပြည်သူအချင်းချင်း၊ အစိုးရအချင်းချင်းဆက်ဆံရေးအလွန်ကောင်း မွန်ခဲ့တယ်။ မိတ်ဆွေရင်းချာလို ပေါင်းသင်းဆက် ဆံခဲ့ကြတယ်ဆိုရင်မမှားပါဘူး။ နှစ် ၂ဝ ကျော်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ တရုတ်- ဂျပန်တို့ဟာ ပြိုင်ဆိုင်မှု၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တွေနဲ့အတူနေလာခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ နှစ်နိုင်ငံ စပ်ကြားမှာ ပဋိပက္ခတွေကိုရှောင်လွှဲလို့မရနိုင် ခဲ့ကြဘူး။ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှု(သို့မဟုတ်)ပြိုင်ဆိုင်မှု ဖြစ်စဉ်တွေကရှိလာခဲ့ကြတယ်။ အားလုံးခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင် တရုတ်နဲ့ဂျပန်တို့ဟာ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေ မှာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကိုတွေ့နိုင်တယ်။ အဲဒီလိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခဲ့တဲ့ကာလမှာ နှစ် နိုင်ငံအကြား နှစ်နိုင်ငံအကျိုးတူအကျိုးခံစား ခဲ့ကြရတာဟာ အမှန်ပဲဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ တရုတ်- ဂျပန်ကုန်သွယ်ရေးပမာဏဟာ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၂၉ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ ဖိုးအထိရှိခဲ့ပြီး သမိုင်းမှာအမြင့်ဆုံးလို့ဆိုတယ်။ ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်မှာ တရုတ်ပြည်က ဂျပန်ကိုသွားတဲ့ ခရီးစဉ်တွေဟာ ဒေါ်လာ ၆ ဒသမ ၃၇ သန်း ဖိုးသုံးစွဲခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုတယ်။
တရုတ်နဲ့ဂျပန်ဟာ ဘက်ပေါင်းစုံမူဘောင်အတွင်းက နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကို ဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတာတွေ့ရတယ်။ အာရှပစိဖိတ် ဒေသတွင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှာ အာဆီယံ အသင်းကြီးနဲ့ အာဆီယံ ၁ဝ+၃ လုပ်ငန်းစဉ် ဖြစ်တယ်။ ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာ တရုတ်၊ ဂျပန် နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ဟာ အာဆီယံအဖွဲ့နဲ့လွတ် လပ်စွာကုန်သွယ်ခွင့်ထူထောင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ ဒီလိုဒေသတွင်း ကျယ်ပြန့်တဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုဟာ မိတ်ဆွေတွေအကြား အပြုသဘောဆောင်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခု လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်-ဂျပန်ဆက်ဆံရေး နောက်ကြောင်း ကိုပြန်ကြည့်ရင် ဂျပန်ကအမေရိကန်နဲ့ မဟာ မိတ်ဖွဲ့ပြီး အင်အားကောင်းလာအောင်နဲ့ ဂျပန်ကို စစ်ရှုံးလို့နှိမ်ထားတဲ့ဘဝက ပုံမှန်ဖြစ်လာ အောင်လုပ်နေတယ်။ ဒါဟာ ဂျပန်အစိုးရနဲ့ ပြည်သူတွေက တစ်ဖက်ကနိုင်ရင် အခြားတစ်ဖက်ကရှုံးရမယ်ဆိုတဲ့ အယူဝါဒကို မစွန့်လွှတ် သေးဘူး။ တရုတ်ကိုပြန်ပြီးထိန်းချုပ်ဖို့ စိတ်ထဲမှာရှိနေသေးတယ်လို့ဝေဖန်ကြတယ်။ တရုတ်-ဂျပန်ဆက်ဆံရေးစစဉ်က ဂျပန်ဟာ စက်မှုနိုင်ငံဖြစ်နေပြီး၊ တရုတ်က လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံအဆင့်သာရှိနေခဲ့တယ်။ ဂျပန်က သမုဒ္ဒရာထဲကကျွန်းနိုင်ငံဖြစ်ပြီး တရုတ်က အာရှတိုက်ကြီးရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် တည်ရှိနေတယ်။ ဒါပေမဲ့ တရုတ်ရဲ့စီးပွားရေး တိုးတက်မှုဟာ ၁၉၃ဝ ပြည့်နှစ်တွေနောက်ပိုင်းမှာ မြန်ဆန်လာခဲ့လို့ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်မှာ တရုတ်ရဲ့ ဂျီဒီပီဟာ ဂျပန်ကို ကျော်လွှားသွားခဲ့တယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၄၂ နှစ်ကတော့ ဂျပန်ဟာ အမေရိကန်ပြီးရင် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးရဲ့ ဒုတိယနေရာမှာ ရှိနေခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ၂ဝ၁ဝ နောက်ပိုင်းမှာ တရုတ်က ခုန်ပျံကျော်လွှားပြီး ဒုတိယစီးပွားရေးအကြီးဆုံးနေရာကိုရယူသွားခဲ့လို့ ဂျပန်ဟာ တတိယစီးပွား ရေးအကြီးဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့ရတယ်။ တရုတ်ကစီးပွားရေးအင်အားတောင့်တင်း လာတာနဲ့အညီ စစ်ရေးကိုလည်း တိုးချဲ့လာခဲ့တယ်။ သမိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်အပျက်တွေကို တူးဆွပြီး ဂျပန်ဘုရင့်တပ်တွေက တရုတ်ပြည်မှာ ရမ်းကားခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကို ပြန်လည် ဖော်ထုတ်ပြီး ဂျပန်ကို ဗြောင်ကျကျထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်လာခဲ့တယ်။ တရုတ်ဟာ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ထဲက စပရက်စ်လီကျွန်းတွေနဲ့ အရှေ့တရုတ်ပင်လယ်က ဒိုင်ယာအိုယူ(ဆင်ကာကူ)ကျွန်း ပိုင်ဆိုင် ကြောင်း ကြေညာခဲ့တယ်။ တရုတ်ရေတပ်နဲ့ လေတပ်တွေကို ဂျပန်ရေပြင်နဲ့ ဝေဟင်ပိုင်နက်အနီးကို သွားရောက်စေခဲ့တယ်။ ဒီလုပ်ရပ်ကို ဂျပန်က အပြင်းအထန်ကန့်ကွက်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် ဂျပန်ဟာ အမေရိကန်နဲ့စစ်ရေး စာချုပ်အသစ်ထပ်မံချုပ်ဆိုပြီး ဂျပန်ကပိုင်တယ်လို့ကြေညာထားတဲ့ ကျွန်း ကိုဖြစ်စေ၊ ဂျပန်ရဲ့ပိုင်နက်နယ် မြေကိုဖြစ်စေ အခြားတစ်နိုင်ငံက ကျူးကျော်လာရင် အမေရိကန်က ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက် မယ်လို့ကတိပေးခဲ့တယ်။ တရုတ်ရဲ့ရန်လိုတဲ့ လုပ်ရပ်ဟာ ဂျပန်ကို ငြိမ်းချမ်းတဲ့နိုင်ငံကနေ စစ်ရေးပုံမှန်နိုင်ငံအဖြစ် ရောက်အောင် လုပ်ဆောင် ပေးဖို့ တွန်းအားပေးခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် ဂျပန်ဟာ စစ်တပ်ကို တိုးချဲ့ခွင့်၊ ဂျပန် စစ်တပ်ကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုစေလွှတ်ခွင့်ရအောင် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ခဲ့တယ်။
ဂျပန်ဟာ သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လုံခြုံရေးတပ်ကိုလည်း တိုးချဲ့ပြီး ရေတပ်၊ လေတပ်နဲ့ ဒုံးပျံလက်နက်တွေကို တိုးတက်အောင် အမေရိကန်နဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ ယခုတရုတ်-ဂျပန်သံတမန်ဆက်ဆံရေး (၄၅) နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့အချိန်မှာနှစ်နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်တွေဟာ နှစ်နိုင်ငံအကြားတင်းမာမှုတွေလျော့ကျအောင် လုပ်ဆောင်သွားရမယ့် အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြတယ်။ ၁၉၈ဝပြည့်နှစ်မတိုင်မီ တရုတ်-ဂျပန်ဆက်ဆံရေးဟာ ရွှေခေတ်လို့ပြောရမလိုတည်ငြိမ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ၁၉၉ဝ ပြည့်နှစ်တွေနောက် ပိုင်းဟာ ပဋိပက္ခအသွင်ဆောင်ခဲ့တဲ့ကာလဖြစ်တယ်။ ယခု ၂၁ ရာစုကိုရောက်ပြန်တော့လည်း တရုတ်နဲ့ဂျပန်တို့ဟာ သဘောထားကွဲပြား မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်။ တရုတ်-ဂျပန် အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားခြင်း မတူကြဘူး။ ဒါကြောင့် တရုတ်-ဂျပန်ဆက်ဆံရေး ပုံမှန်ဖြစ်သွားအောင် အချိန်ယူလုပ်သွားရပါလိမ့်မယ်။ တရုတ်ရဲ့စီးပွားရေးချဲ့ထွင်မှုဖြစ်တဲ့ Belt and Road အစီအစဉ်မှာ ဂျပန်ပါခဲ့ရင်တော့ တရုတ်-ဂျပန်ဆက်ဆံရေး ပိုပြီးတိုးတက်လာလိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါကြောင်း သုံးသပ်တင်ပြအပ်ပါတယ်။ ။
Ref: AFP, G-Times
ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံ အထောက်အထား တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ခြင်း မကြာမ??
စာပေဟောပြောပွဲမှ အပြန် ကဗျာဆရာနှစ်ဦး စီးလာသောကား ခဲဖြင့် အထုခံရ၊ တစ်ဦး ဒဏ်ရာရ
စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီး၌ လယ်ယာလုပ်သား ရှားပါးလာမှုကြောင့် တောင်သူများ မျိုးစေ့ချကိရိယာ သု??
မြန်မာ့ရုပ်ရှင် နှစ် (၁ဝဝ) ပြည့်ပွဲတော် ရုပ်ရှင်စာတမ်းဖတ်ပွဲကို သိဒ္ဓိ၊ ဏကြီး၊ ခရစ်(စ)တီးနားခ
နိုင်ငံရေးလုပ်တာ သြဇာကြီးမားရန် မဟုတ်၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် ဖွံ